Tongasoa eto amin'ny tranokalanay.
Fitaovana fananganana gypsum sy putty
Rafitra fametrahana taila
Takelaka nesorina tamin'ny simenitra
Indostrian'ny Coatings rano
Manimba ny vatan'olombelona ny hydroxypropyl methylcellulose? Inona no tokony hotadiaviko?
Ny hydroxypropyl methylcellulose dia tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​dia azo antoka sy tsy misy poizina ny hydroxypropyl methyl cellulose, azo ampiasaina ho additive sakafo, tsy manana hafanana ary tsy manana fanelingelenana amin'ny hoditra sy fifandraisana amin'ny membrane moka. Amin'ny ankapobeny dia raisina ho antoka azo alain-tànana azo avela isan'andro amin'ny 25mg / kg, prot ...
Fividianana sy fampiasana ny vovony redispersible
tamin'ny admin tamin'ny 19-06-08
Vovoka azo ovaina Ny vovoka latex azo ovaina dia fanaparitahana vovoka vita amin'ny emulsion polymer polymer polymère amin'ny alàlan'ny fanamainana. Manana fanaparitahana azy tsara izy ary azo averina ao anaty emulsion polimina azo antoka aorian'ny fampidirana rano. Ny fampisehoana dia mitovy amin'ny emulsion voalohany. Th ...
Fampiharana ny vovo-dranon'elanelana azo haverina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-03-18
Ny vovony redispersible dia vovony namboarina amin'ny famafazana polymer emulsion, antsoina koa hoe vinaingitra kapaoty. Ity vovoka ity dia azo ahena haingana ho emulion aorian'ny fifandraisany amin'ny rano, ary mitazona ireo fananana mitovy amin'ilay emulsion tany am-boalohany, izany hoe, hisy horonantsary iray aorina aorian'ny etona amin'ny rano ...
Ny hydroxypropyl methylcell ...
Fananana sy fampiasana redi ...
Fampiharana ny Redispersibl ...
7F, Trano 3B, Faritra Aodong, Distrika Quanshan, Xuzhou, Sina
Antsoy izahay izao: 0086-18118579776